များပြား လှတဲ့ ပိုက်ဆံထုပ်ကြီး ကိုရှေ့မှာ ချပြီး မိန်းမဖြစ်သူ ကို ကြပ်နေတဲ့ ဆုပန်ထွာ ရဲ့ ခင်ပွန်း ဥက္ကာကျော် – Let Pan Daily
ချစ်စရာကော င်းပြီး သာယာချမ်းမြေ့ဖွ ယ်ကောင်း တဲ့မိသားစု ဘဝလေး ကို တည်ထောင် ထားကြတဲ့ အနုပညာ ရှင်ဆယ်လီ မိသားစုများထဲ တွင် ဆုပန် ထွာတို့လည်းအ ပါအဝင်ဖြစ်ပါ တယ်။ ဆုပန် ထွာရဲ့ခင်ပွန်ြး ဖစ်သူ ကိုဥက္ကာေ ကျာ်ဟာလ ည်း ဂရုစိုက်ကြင်နာတ တ်တဲ့ခင်ပွ န်းကော င်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ချစ်စရာကောင်း တဲ့ သားလေး Roar Roar Kyaw ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဥက္ကာကျော် ဟာ ဇနီးချောလေး ဆုပန်ထွာရဲ့ အနုပ ညာလှုပ်ရှားမှုေ တွကိုလည်း အပြည့်အဝ ကူညီပေး တဲ့ခင်ပွန်းေ ကာင်းတစ်ယော က်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဥက္ကာ ကိုယ်တိုင် ကလည်း အနုပညာအလုပ်ကို စိတ်ဝင်စား တဲ့သူဖြစ်ပြီး အခုလက်ရှိ ရိုက်ကူးေ တာ့မယ့် အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ကာြး ကီးမှာလည်း ဂဠုန်ဦးစောအနေ နဲ့ေ ရွးချယ်ခြင်း ခံရတာဖြစ် ပြီး ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးသွား မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဥက္ကာေ ကျာ်ဟာ မကြာခဏ ဆို သလိုလည်း သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ အခွီစာ သားလေးတွေရေးပြီးတ င်လေ့ရှိတဲ့သူပါ။ မကြာသေးမီ ကလည်း သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ” မြန်မာ ကားတွေ ထဲ ကအတိုင်း… Messenger ထဲမှာ ကောင်မလေးတ စ်ယောက်က ကျွန်တော့ ကိုစကားေ တွလာ လာပြောတယ်။ Phone တွေလည်း ခိုးခိုးပြီး ဆက်တယ် ပေါ့ဗျာ…အဲ့ဒါကို အဆင့်အတန်း ခွဲခြားတတ်တဲ့ သူ့အမေကြီး ကမိသွားပြီးမင်း ငါ့သမီးနဲ့လုံးဝ မပတ်သက်နဲ့တော့…. ရော့ ဒါတွေ အကုန်ယူသွား… တဲ့ မအေးအေးဝင်း စီစဉ်တင်ဆက်သည်” ဆိုပြီးရေးသား ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ….ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေေ ပးလိုက်ပါ တယ်နော်။
Source;Okkar Kyaw’s Facebook acc
မြားပွား လှတဲ့ ပိုကျဆံထုပျကွီး ကိုရှမှေ့ာ ခပြွီး မိနျးမဖွဈသူ ကို ကွပျနတေဲ့ ဆုပနျထှာ ရဲ့ ခငျပှနျး ဥက်ကာကြျော
ခဈြစရာကော ငျးပွီး သာယာခမျြးမွဖှေ့ ယျကောငျး တဲ့မိသားစု ဘဝလေး ကို တညျထောငျ ထားကွတဲ့ အနုပညာ ရှငျဆယျလီ မိသားစုမြားထဲ တှငျ ဆုပနျ ထှာတို့လညျးအ ပါအဝငျဖွဈပါ တယျ။ ဆုပနျ ထှာရဲ့ခငျပှနျွး ဖဈသူ ကိုဥက်ကာေ ကျြာဟာလ ညျး ဂရုစိုကျကွငျနာတ တျတဲ့ခငျပှ နျးကော ငျးတဈဦးဖွဈပွီး ခဈြစရာကောငျး တဲ့ သားလေး Roar Roar Kyaw ကိုလညျး ပိုငျဆိုငျနပွေီဖွဈပါတယျ။
ဥက်ကာကြျော ဟာ ဇနီးခြောလေး ဆုပနျထှာရဲ့ အနုပ ညာလှုပျရှားမှုေ တှကိုလညျး အပွညျ့အဝ ကူညီပေး တဲ့ခငျပှနျးေ ကာငျးတဈယော ကျဖွဈပါတယျ။ ကိုဥက်ကာ ကိုယျတိုငျ ကလညျး အနုပညာအလုပျကို စိတျဝငျစား တဲ့သူဖွဈပွီး အခုလကျရှိ ရိုကျကူးေ တာ့မယျ့ အောငျဆနျးရုပျရှငျကာွး ကီးမှာလညျး ဂဠုနျဦးစောအနေ နဲ့ေ ရှးခယျြခွငျး ခံရတာဖွဈ ပွီး ပါဝငျသရုပျဆောငျ ရိုကျကူးသှား မှာလညျးဖွဈပါတယျ။
ကိုဥက်ကာေ ကျြာဟာ မကွာခဏ ဆို သလိုလညျး သူ့ရဲ့ Facebook စာမကျြနှာမှာ အခှီစာ သားလေးတှရေေးပွီးတ ငျလရှေိ့တဲ့သူပါ။ မကွာသေးမီ ကလညျး သူ့ရဲ့ Facebook စာမကျြနှာမှာ” မွနျမာ ကားတှေ ထဲ ကအတိုငျး… Messenger ထဲမှာ ကောငျမလေးတ ဈယောကျက ကြှနျတော့ ကိုစကားေ တှလာ လာပွောတယျ။ Phone တှလေညျး ခိုးခိုးပွီး ဆကျတယျ ပေါ့ဗြာ…အဲ့ဒါကို အဆငျ့အတနျး ခှဲခွားတတျတဲ့ သူ့အမကွေီး ကမိသှားပွီးမငျး ငါ့သမီးနဲ့လုံးဝ မပတျသကျနဲ့တော့…. ရော့ ဒါတှေ အကုနျယူသှား… တဲ့ မအေးအေးဝငျး စီစဉျတငျဆကျသညျ” ဆိုပွီးရေးသား ထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ကဲ….ပရိတျသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျမြှဝေေ ပးလိုကျပါ တယျနျော။
မိမိုကျလှနျးတဲ့ ဖကျရှငျလေး နဲ့ ပုရိသတှေ ကို ဖမျးစားလိုကျတဲ့ “အိခြောပို”
အမိုကျစား ပုံစံလေး နဲ့ ရခြေိုးနတေဲ့ အလနျးစားပုံတှေ တငျပေးလိုကျတဲ့ မျောဒယျလျ ဖွူသိင်ျဂကြျော